အိုးဝေ: သူစိမ်းတို့ရဲ့အလယ်မှာ (၄)
ThuHninSee December 19, 2008 at 4:48 PM
ကိုနိက ပျင်းမှာစိုးလို့ နောက်တစ်ခါ ခရီးမသွားတော့ဘူးများ
- December 19, 2008 at 4:50 PM
လင်း December 19, 2008 at 5:18 PM
မနိတို့ တော့ကလေ လွန်တယ်။ ဖုန်းကဒ်တွေ အများကြီး သယ်သွားသတဲ့ ။
မဖတ်ရသေးဘူး.. လက်မှတ်အရင်လာထိုးတာဒေါ်ဒေါ်နိ.. ဒါတောင် တတိယတဲ့..း(
ဟုတ်ပေါင်.. ခုန စတုတ္ထကြီး...ပိုဆိုး..း(
ကဲ.. ဒေါ်ဒေါ်နိနဲ့နောက်က လိုက်သွားရသလိုပဲ.. ပျော်စရာကြီး.. အစားအစာတွေကလည်း တမျိုးပဲ.. ကြည့်ရင်းရင်တောင်ပြည့်တယ်.. (ဗိုက်ဆာနေရင်တော့ မပြောတတ်)
ဦးဦးနိကြီးကလည်း စိတ်ကောက်တတ်တယ်ဗျို့...းP
PAUK December 19, 2008 at 6:08 PM
Republic December 19, 2008 at 8:09 PM
မနိ.. ဂျပန်မှာ စားတဲ့ သောက်တဲ့ ခွက်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းသား ၊၊ ပုံထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်လေ ၊၊
လာလည်ချင်တယ်ဗျာ ၊၊ လေယာဉ်ဖိုး ပိုက်ပိုက် မရှိပါ ၊၊ ထီပြန်ထိုး အုံးမှပဲဗျာ ၊၊ ကွိကွိ
မီယာ December 20, 2008 at 1:59 AM
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာနိနိရေ- နေရာစုံလည်းရောက် ဂျပန်စာလည်းစား ကိုဇနိအကြောင်းလည်း တစေ့တစောင်းလေ့လာသွားပါတယ် :)
htay December 20, 2008 at 7:01 PM
I always visit to ur blog whenever I am free! I like all ur writing!!!!!
Myanmar lo write tat bu hayyyyyyyyyy.
ဇနိ December 21, 2008 at 6:23 AM
သူငယ်ချင်း ရေ စာလာဖတ်တယ်ဆိုလို့ ပျော်နေတာ။
အိုးဝေကို မင်းမသိလောက်ဘူး ထင်တာဝေး။
အဆက်အသွယ်လည်းမရ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ သူငယ်ချင်း။
တားမြစ် ထားသော... December 21, 2008 at 7:02 AM
“အဝေးကဆိုတော့ ကျွန်မတို့နေတဲ့နေရာက မြေကွက်လပ် ပိစိလေးကိုး။”
အပိုင်းတစ်အပြီးမှာ ဒီအပိုင်းလေးဟာ အစွဲဆောင်ဆုံးပါ။ ဗဟုသုတလည်းဆုံတယ်။ သူစိမ်းတွေကြားမှာ အနေတတ်လာတာကိုလည်း တွေ့လိုက်ရတယ်။ အပေါ်ဆုံးက အမြင်လေးကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။
Yu Wa Yi December 21, 2008 at 12:35 PM
သူစိမ်းတို့ ရဲ့အလယ်မှာခုဆိုချမ်းနေရှာရော့မယ်နော်နိနိလေး။ ကိုစိုင်းပြန်ပြောပြတဲ့ သူ့ ရဲ့ဂျ
ပန်အတွေ့ အကြုံတွေအရတော့ တော်တော်အေးဆိုပဲ။ စောင့်ဖတ်နေတယ်သိလား နိနိ။
nu-san December 21, 2008 at 4:07 PM
မဇနိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေက မရိုးဘူး.. ကျောင်းနဲ့ခရီးသွားရတာ ပျော်စရာကြီးနော်.. ကိုဇနိက စိတ်ကောက်တတ်တာ အခုမှ သိတော့တယ်.. နောက်တခါ Hokkaido သွားရင်တော့ တအားအေးလို့ ချမ်းလည်း ချမ်းတယ်.. လွမ်းလည်း လွမ်းတယ် ဆိုပြီး ကိုဇနိကို သီချင်းဆိုပြလိုက်နော်... :)